Shan Koe Mee -ရှမ်းကိုးမီး ဘူကြီး ရွှေရှမ်း 13ချပ် Apk | Shan Koe Mee -ရှမ်းကိုးမီး ဘူကြီး ရွှေရှမ်း 13ချပ် Free Android Apps | Apk Download
Shan Koe Mee - ရှမ်းကိုးမီး（SKM） ၊ ရွှေရှမ်း(Shwe Shan) ၊ ဘူကြီး(Boogyi) ၊ ၁၃ချပ်(13ချပ်)နှင့် ရှိုး(Show)တို့ သည် နောက်ဆုံးထွက်လာသောဂိမ်းတစ်ခုပါ။ ဂိမ်းထဲတွင် ရှမ်းကိုးမီး၊ ရွှေရှမ်း စသည့် မြန်မာ့ရိုးရာ လူကြိုက်များသောဖဲကစားနည်းများပါပါသည်။ ဂိမ်းထဲတွင် လုပ်ဆောင်မှုများ ပြည့်စုံစွာတပ်ဆင်ထား၍ ဂိမ်းပတ်ဝန်းကျင်လည်း ရိုးရှင်းသပ်ရပ်စွာ တင်ပေးထားသည်။ Beauty dealer နှင့်အတူတူဖျောဖြေဇိမ်ခံလိုက်ပါ။
4.5/5 Votes: 4,592
Shan Koe Mee – ရှမ်းကိုးမီး（SKM） ၊ ရွှေရှမ်း(Shwe Shan) ၊ ဘူကြီး(Boogyi) ၊ ၁၃ချပ်(13ချပ်)နှင့် ရှိုး(Show)တို့ သည် နောက်ဆုံးထွက်လာသောဂိမ်းတစ်ခုပါ။ ဂိမ်းထဲတွင် ရှမ်းကိုးမီး၊ ရွှေရှမ်း စသည့် မြန်မာ့ရိုးရာ လူကြိုက်များသောဖဲကစားနည်းများပါပါသည်။ ဂိမ်းထဲတွင် လုပ်ဆောင်မှုများ ပြည့်စုံစွာတပ်ဆင်ထား၍ ဂိမ်းပတ်ဝန်းကျင်လည်း ရိုးရှင်းသပ်ရပ်စွာ တင်ပေးထားသည်။ Beauty dealer နှင့်အတူတူဖျောဖြေဇိမ်ခံလိုက်ပါ။
How to install Shan Koe Mee -ရှမ်းကိုးမီး ဘူကြီး ရွှေရှမ်း 13ချပ် APK?
1. Tap the downloaded Shan Koe Mee -ရှမ်းကိုးမီး ဘူကြီး ရွှေရှမ်း 13ချပ် APK file.